Mediam-bahoaka · Avrily, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Avrily, 2017
Jolay 2022 2 Lahatsoratra
Jona 2022 50 Lahatsoratra
Mey 2022 51 Lahatsoratra
Avrily 2022 50 Lahatsoratra
Marsa 2022 50 Lahatsoratra
Febroary 2022 49 Lahatsoratra
Janoary 2022 50 Lahatsoratra
Desambra 2021 51 Lahatsoratra
Janoary 2021 48 Lahatsoratra
Avrily 2020 57 Lahatsoratra
Marsa 2020 39 Lahatsoratra
Aogositra 2019 88 Lahatsoratra
Jolay 2019 163 Lahatsoratra
Jona 2019 210 Lahatsoratra
Desambra 2018 203 Lahatsoratra
Septambra 2018 171 Lahatsoratra
Jona 2018 217 Lahatsoratra
Desambra 2017 176 Lahatsoratra
Oktobra 2017 223 Lahatsoratra
Aogositra 2017 227 Lahatsoratra
Avrily 2015 114 Lahatsoratra
Marsa 2015 109 Lahatsoratra
Febroary 2015 104 Lahatsoratra
Desambra 2014 94 Lahatsoratra
Novambra 2014 80 Lahatsoratra
Oktobra 2014 96 Lahatsoratra
Aogositra 2014 94 Lahatsoratra
Jolay 2014 145 Lahatsoratra
Mey 2014 93 Lahatsoratra
Avrily 2014 92 Lahatsoratra
Febroary 2014 125 Lahatsoratra
Janoary 2014 124 Lahatsoratra
Oktobra 2013 131 Lahatsoratra
Septambra 2013 101 Lahatsoratra
Aogositra 2013 45 Lahatsoratra
Jolay 2013 113 Lahatsoratra
Mey 2013 74 Lahatsoratra
Avrily 2013 114 Lahatsoratra
Marsa 2013 117 Lahatsoratra
Febroary 2013 94 Lahatsoratra
Novambra 2012 211 Lahatsoratra
Septambra 2012 74 Lahatsoratra
Aogositra 2012 134 Lahatsoratra
Jolay 2012 146 Lahatsoratra
Avrily 2012 117 Lahatsoratra
Marsa 2012 169 Lahatsoratra
Desambra 2011 79 Lahatsoratra
Novambra 2011 90 Lahatsoratra
Oktobra 2011 123 Lahatsoratra
Septambra 2011 50 Lahatsoratra
Aogositra 2011 33 Lahatsoratra
Jolay 2011 36 Lahatsoratra
Mey 2011 32 Lahatsoratra
Avrily 2011 31 Lahatsoratra
Marsa 2011 45 Lahatsoratra
Febroary 2011 19 Lahatsoratra
Novambra 2010 8 Lahatsoratra
Oktobra 2010 12 Lahatsoratra
Jolay 2010 24 Lahatsoratra
Mey 2010 14 Lahatsoratra
Febroary 2009 11 Lahatsoratra
Jona 2008 1 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Avrily, 2017
Hetsipanoherana Manohitra ny Kolikoly Ao Romania Sy Ny Vesatry ny Henatra
Eoropa Afovoany & Atsinanana 30 Avrily 2017
Na rakotry ny henatra manarona ny firenena aza, nandritry ny andro maromaro i Romania dia toerana iray nanainga fanahy, satria nidina an'arabe ny olona ary niaky ny fisian'ny kolikoly miely patrana.
Tamin'ny 1996 no Fotoana Farany Nisian'ny Olona Marobe Tahaka Izao Nanao Fitokonana Tao Brezila
Amerika Latina 30 Avrily 2017
Mpanao hetsipanoherana mijoro manohitra ireo andianà fanavaozana mifamatotra amin'ny fitsitsiana izay natosiky ny filoha Breziliana Temer ary nahazoany tohana avy amin'ny sehatry ny fandraharahàna, na efa miharendrika aza ny lazany.
Nalaza tao amin'ny Twitter ny “Faly Aho avy ao Tohoku” Taorian'ny Teny Tsimifaditrovana Nataon'ny Politisiana Japoney Iray
Azia Atsinanana 30 Avrily 2017
Niteraka tenirohy malaza ao amin'ny Twitter fanohanana ny faritra Tohoku ao avaratra atsinanan'i Japana sy fitakiana fialan'ilay minisitra ny fanamarihana feno fahamafisam-po nataon'ilay minisitra Japoney iray mpikambana ao amin'ny kabinetra.
Nanakana Sehatra Media Sosialy Miisa 22 Tao Kashmir Ny Governemanta Indiana
Azia Atsimo 29 Avrily 2017
"Amin'ny fanehoana ny lafiny hafa amin'ny tantara ao Kashmir, afaka naneho nandritra ny fotoana kely ny hasarotry ny tantara sy ny fifandirana tena sarotra ao Kashmir ny mponina ao an-toerana ."
Manamarika Ny Lohataonan'ny Nosy Grika Ao Chios Ny Lalady na ny Voninkazo Tiolipa ao An-toerana
Eoropa Andrefana 29 Avrily 2017
Miresaka tantaran'ny fifindra-monin'ilay voninkazo ny voambolana lalady ao Chios rehefa miteny hoe tiolipa.
Nilaza Ny Hetsi-panoherana Rosiana Fa Mitohy ny Tolona, na dia eo aza ny Fandraràna Federaly
Eoropa Afovoany & Atsinanana 29 Avrily 2017
Na dia noraràn'ny mpampanoa lalàna androany aza, nilaza ny hetsi-panoherana “Rosia Misokatra” fa hanohy ny hetsika rehetra, anisan'izany ny drafitra fihetsiketsehana manohitra an'i Potinina manerana ny firenena androany Asabotsy.
Hay Tena Kely Tokoa Ity Izao Tontolo Izao Ity : Fandraisampeo Mankany Amin'ny Lalina
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Avrily 2017
Mandania fotoana miaraka amin'olona avy any amin'ny firenen-kafa, na miteny amin'ny fiteny hafa, ary tsy ho ela dia ho hitanao fa maro kokoa noho izay noeritreretinao tamin'ny voalohany ny zavatra itovizanareo.
Lohalaharana ao Azia i Taiwan Raha Nihemotra Toerana Efatra Kosa i Hong Kong ao Anatin'ny Tondro Momba ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety
Azia Atsinanana 28 Avrily 2017
"Nilaza fitomboan'ny tsindry ny ankamaroan'[ireo mpiasa amin'ny media ao Hong Kong], izay miteraka fanivànan-tena iniana atao."
Ahoana ny Nandaozan'i Alexey Navalny ny Nasionalisma Rosiana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 28 Avrily 2017
Tsy maintsy niova i Alexey Navalny hiandraiketany ny Rosiana mpanohitra, saingy mety mitsahatra amin'ny kabary fandrendreham-bahoaka ifanoherany amin'i Vladimir Potinina izy eny an-dalana.
Ny Fomba Nahatongavan'ny Mariky ny Silamo Henjam-Pihetsika ao Indonezia Hatrany Anaty Pejin'ny Marvel Comics
" Io asa kanto io dia hoesorina ao anatin'ireo boky voatonta, ny dika dizitaly, ary ireo bokikely fanao am-paosy, ary hisy fepetra ara-pitsipika horaisina," araka ny fanambaràna navoakan'ny Marvel Comics.